Dzidzo paKumhanya kweTechnology | Martech Zone
Dzidzo paKumhanya kweTekinoroji
Chipiri, February 17, 2009 Svondo, May 29, 2016 Douglas Karr
Nezuro manheru ndakapihwa mukana wekutaura kuna CIT 499 kirasi kuIUPUI nokuti Chiremba Thomas Ho. Raive rakabatikana kirasi, rakaumbwa nevamwe vadzidzi vaive vasina kupinda munzvimbo yebasa, vamwe vaive, uye vamwe vaive vachishanda muhunyanzvi.
Mukutaura kwavari, ini ndakangogovana zvandaisangana nazvo pamabhizimusi ari kutanga kutora (kana kumanikidzwa kutora) enhau enhau yekushambadzira. Uku kushambadzira kunosanganisira zvese kuchengetedza uye kutora mhando. Mabhizinesi ari kuyedza kugadzirisa, asi isu tinoziva kuti anononoka sei mamwe makambani kuchinja.
Yedu dzidzo system iri kumanikidzwa kuchinja futi. Ini ndakagovana iyi inoshamisa vhidhiyo iyo Amy Stark kutumirwa kwandiri kukirasi:
Ndinovimba kuti ndakasiya fungidziro nekirasi pane zvimwe zvinhu chaizvo.
Kune vedu vakapedza kudzidza veCIT vachipinda muZvivakwa, ino inguva isinganzwisisike yatiri kurarama mairi - kupi simba remagetsi riri kufamba kubva kumatenga akatengwa kuenda kumakore ari kure. Zviri kuchinja mashandisiro atiri kuita uye kuendesa software, mashandisiro atinoita software iyi, uye nemabatiro atiri kuita mabhizimusi matsva epamhepo.Ndakataura kuboka kuti vanofanirwa kushanyira Blueap yeIndiapolis yega nharaunda pamwe ne Lifeline's Eastgate Mall kushanyira iro ramangwana rekutsvaga data.
Kune vedu CIT vakapedza kudzidza kupinda mune software, Software seSevhisi ndiyo chete ramangwana. Iyo yekare modhi yekuvaka uye kuendesa software pane midhiya haina kukanganisa, inodhura, uye inoshaya risingagumi kugona kunoitwa SaaS Vanhu vazhinji vachiri kufarira iyo yekare modhi yekushandisa software - ndinogona kupokana kuti iyo bhizimisi yeSawaS muenzaniso unoshamisa unobvumidza mabhizimusi kubhadhara mari nekukurumidza, kuita pundutso nekukurumidza, uye kuramba uchisimudzira ruzivo rwevashandisi nemari shoma.
Kune chero mudzidzi wekoreji, ini handigone kunetseka mukurumbira manejimendi zvakakwana. Kudzidzisa vadzidzi vedu kuvaka mukurumbira wepamhepo - kungave nekuvaka mapurojekiti uye kuatumira kune webhu, kublogga nezvavo, kujoina masocial network, uye kujoina nyanzvi maratidziro ekutanga kusimudzira hukama hwehunyanzvi matanho ese anodiwa kuti ubude mukoreji uye upinde mune rakabudirira basa Ini ndinofunga isu tese tinobvumirana kuti, panguva ino, mazuva ekutsvaga kukuru nemakambani kuti ufambe mumafuta basa rakaenda kare. Nekuwana online nekukurumidza, kukudziridza hunyanzvi huvepo, uye kutanga kusangana nekukwazisa nevematunhu nyanzvi - unogona kunge uine pfuti pane mashoma mashoma masuo akavhurika.
Kutenda kuna Dr. Thomas Ho uye CILT Sachigaro Stephen Hundley pa IUPUI yemukana wekugovana zvandakadzidza nekirasi. Ini handikwanise kutaura zvakakwana nezve kushamisa kwevashandi uye zvivakwa zviri paIUPUI - uye kuvaita kuti vavhure kune vemabhizimusi vematunhu uye vezvenhau vanhu vakaita seni zvinoratidza kuzvipira kwavo pakufambisa dzidzo nekumhanya kwetekinoroji!
IUPUI zvakare ine nzvimbo yakakosha mumoyo mangu nekuti ndiko kwave kuenda kuchikoro nemwanakomana wangu. Bill mudzidzi anokudza paIUPUI mune ese Math uye Fizikisi, mudzidzisi weMath lab uye ari kutanga kuita ongororo yeFizikiki ipapo. IUPUI yanga iri inoshamisa institution - ichipa nekukurudzira mwanakomana wangu kuwedzera mumikana mitsva uye yakaoma mazuva ese. Iye achangobva kusarudzwa nevashandi veiyo Barry Goldwater kudzidza!
Tags: barry yemvura yegoridhe kudzidzacitdzidzoiupuiphysicsstephen hundleythomas hoyunivhesiti
Tinodaidza kuti Media, iri Medium chaiyo
Vane Vatasvi Vemabhiza Ekutanga